Home News Xiisad ka dhalatay ishoristaag lagu sameeyay Madaxdii hore ee Dalka oo Garoonka...
Xiisad ka dhalatay ishoristaag lagu sameeyay Madaxdii hore ee Dalka oo Garoonka Muqdisho kataagan
Warar dheeraad ah oo laga helayo Garoonka Aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xiisad ka taagan tahay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, kaddib markii Maamulka Garoonka uu amar ku soo rogay in aanay ka dhoofi karin wafdi ay hoggaaminayaan Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif oo maanta ku sii jeeda Beledweyne.
Wararka ayaa sheegaya in la xanibay diyaaraddii ay wafdiga raaci lahaayeen, kaddib amar dowladda ka soo baxay
Xildhibaan C/risaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in wafdiga Madaxweynayaashii hore oo xilligan ku sugan garoonka loo diidan yahay safarkooda Beledweyne, isla markaana ay tahay arrin la siyaasadeynayo.
“Labada Madaxweyne safarkooda gurmadka Beledweyne ee maanta waa loo diidan yahay inay garoonka ka dhoofaan, maamulka Garoonka, waxay leeyihiin ma bixi kartaan amar ayaa heysanaa, markaa weydiinay waxay na dhaheen Madaxweyne Waare iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa bixi raba oo beledweyne aadaya”ayuu yiri Xildhibaan C/risaaq.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goordhow u ambabaxay magaalada Baladweyne oo ay kaa taagan xaalad adag oo dhanka nolosha oo ka dhalatay Fatahaaddii uu sameeyay Wabiga Shabeelle.
Waa markii Labaad oo madaxweynayaashii hore ee dalka laga hor istaago iney ka dhoofaan Garoonka Aadan cadde ee magaalada Muqdisho,waxaana markii ugu horeysay loo diiday iney aadaan magaalada Kismaayo oo ay kaga qeyb gali lahaayeen caleema saarka Axmed Madoobe,inkastoo is jiid jiid badan ka dib loo ogolaado iney u safraan Kismaayo.
Lama oga Jawaabta ay ka bixinayaan Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif tallaabada loogu diiday iney u dhoofaan magaalada Kismaayo oo ay arrimo gargaar ugu wajahnaayeen.